Beesha Caalamka oo daba-gal ku sameyn doonta tallaabooyinka lagu heshiiyo ee shirka Dhuusamareeb – Kalfadhi
Beesha Caalamka oo daba-gal ku sameyn doonta tallaabooyinka lagu heshiiyo ee shirka Dhuusamareeb
August 19, 2020 Hassan Istiila
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan hoggaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee gaaray magaalada Dhuusamareeb 15kii bishan Agoosto, si ay u billaabaan kulankooda xiga, sida qorsheysnayd.
Waxay sidoo soo dhoweyeen billowga hawsha guddiga farsamo ee wadajirka ah ee loo xilsaaray diyaarinta xulashooyinka hanaan doorasho oo la isugu tanaasulay oo la isku afgarto si madaxu uga baarandegaan.
Saaxiibada Soomaaliya ayaa si xooggan ugu dhiirigelinayaan madaxda Dowladaha Xubnaha ka ah Federaalka ee aan weli kulanka ku soo biirin inay si toos ah ula xiriiraan dhiggooda hadda jooga magaalada Dhuusamareeb si loo xalliyo wixii arrimo ah oo taagan si ay dhammaantood uga wada qaybqaataan.
Saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan inay muhim tahay in dhammaan madaxdu ay ka qaybqaataan shirmadaxeedkan si loo sii wado geeddi-socodka dhisidda isafgarad wadar-ogol ah, loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hanaanka doorashooyinka federaalka 2020/21 oo qanciya dhammaan saamilleyda Soomaaliyeed. Waxay dhammaan madaxda xusuusinayaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta horumarka laga gaaray dowlad-dhisidda Soomaaliya iyo ka soo bixidda ballammadii horey loo galay.
Iyadoo tan la eegayo, saaxiibadu waxay mar kale adkeynayaan in isku day kasta oo uu ku kaco mid keliya ama qaar yar oo ka mid ah saamilleyda oo si qasab ah loogu mariyo qaabab doorasho uusan yeelan doonin sharciyad isla markaana aan laga hirgelin karin iyadoo aan taageerada lagama maarmaanka ah laga helin dhammaan saamilleyda kale.
Saaxiibadu waxay si dhow ula socdaan waxyaabaha ka soo kordha kulanka magaalada Dhuusamareeb, waxayna dabagal ku sameynayaan tallaabooyinka lagu heshiiyo waxayna diyaar la yihiin inay bixiyaan hadba taageerada ay ka codsadaan dhammaan ka qaybgalayaasha si loo fududeeyo hirgelinta.
Puntland ayaa maalmo ka hor ku eedeysay dowladda Federaalka fashilinta natiijooyinkii ka soo baxay shirarkii Dhuusamareeb 1 iyo 2, waxaana ay ugu baaqday Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo inuu soo magacaabo ra’iisal wasaare qeyb ka noqda fulinta heshiisyada laga gaaro qabsoomidda doorashada dalka ee 2020/2021.
Puntland ayaa soo jeedisay in ka hor qabsoomidda shirka Dhuusamareeb 3 heshiis siyaasadeed la gaaro, kadibna ay shirkaasi ka qeybagalaan dhammaan madaxda federaalka, maamul goboleedyada iyo diblomaasiyiinta shisheeye ee daneeya arimaha Soomaaliya “si ay u damaanad qaadaan hirgelinta natiijada shirka”.
Wasiirka ma leeyahay awood uu ku oggolaado Canshuur Dhaaf?
Xildhibaan Odawaa oo sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu ku guul-dareystay saddex arrimood oo muhiim ah